Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF) : Mitaky ny fialan’ny mpitondra Fat – MyDago.com aime Madagascar
Ny marina dia mitari-dalana ny namany (ohab :12: 26) io no lohahevitra nifantohan’ny hetsika notanterahan’ny Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana na HMF androany teny amin’ny Gradin Fjkm Ambohimanarina. Tonga nanatrika tenyan-toerana ny Me Hanitra Razafimanatsoa, Andriamatoa Ralahiseheno Guy Maxime Ankolafy Ravalomanana. Teo ihany ny Pr Raymond Ranjeva, ny Me Willy Razafinjatovo. Taorian’ny fotoam-pivavahana dia nisy hatrany ny fisaorana sy ny fanambarana nataon’ny HMF. Anisan’ny voalaza ao anatin’izany fanambarana izany, fa mbola tsy voavaly hatramin’izao ny fanontaniana hoe mizotra mankaiza isika? Mbola ao anaty krizy isika,ary mijotso midina hatrany ny fiainan’ny firenena na dia hita fa migalabona sy misondrotra haingana aza ny fiainan’ireo lazaina fa mpitondra azy, ka tsy fahamarinana izany . Ho an’ny HMF dia tsymisy afa tsy ny fijroan’ny izay tia fahamarinana ihany no vahaolana hanavotra ny firenena, fa raha tsy izany dia mbola ho viravirain’ny ratsy fanahy amin’ny fitiavantenany ny firenentsika ka mbola hitohy ny krizy. Koa miantso ny vahoaka Malagasy rehetra mba hiray hina sy hiandany amin’ny fahamarianana sy handray handraikitra.Resy lahatra izahay HMF fa ny zavamitranga rehetra eto amin’ny firenena dia mbola fampiasana ny fitsarana ho fitaovana politika, ny tsy fandriampahalemana, ny korontana ara-tsosialy sns.Mahasoa ny firenena hoy ny HMF ny fisian’ny fahamarinana eto ary takianay ny hanjakan’izany amin’ny endriny rehetra : aza lalaovinareo ny ho avin’ny taranaka, avelao ny mpitsara hanao ny asany am-pahamarinana, avelao hiteny ny vahoaka, aoka ny miaramila ho mpiaro ny vahoaka tokoa, sokafy ho an’ny rehetra ny haino amam-jerim-panjakana fa efa nampanantena izany ianareo, omeo fahafahana hivory sy haneho hevitra an-kalalahana ny olona fa efa nambaranareo fa atao izany, sokafy ny Radio Fahazavana sy ny kianja ao Antsahamanitra fa rariny izany. Raha tsy mbola vonona hanao izany ianareo, hoy ny HMF, dia tena sitrapon’Andriamanitra ny miala am-panajana.. fa manana olona vonona hanatanteraka izany ity tany ity. Nambaran’izy ireo kosa anefa fa mivoha midanadana ho an’ireo rehetra tia fahamarinana ny varavarany.
Auteur Solo Razafy*Publié le 24 mars 2012 24 mars 2012 Catégories Politique
16 réflexions sur « Hetsiky ny Mpitondra Fivavahana (HMF) : Mitaky ny fialan’ny mpitondra Fat »
Hanao an’izany ihany moa koa nahoana no natao taraiky loatra???
mahafinaritra fa tohizo e!!tsy ho enjehin’i bombe eo indry ianareo???
mahavità be e!!aoka hatambatra @’izay ny hery izay MANOHITRA REHETRA hanala io fantsika REZATRA
efa arafesenina hatrany anaty tsinay maintiny io e!!HOMBA ANTSIKA ANDRIAMANITRA!AZA MATAHOTRA!!
24 mars 2012 à 20 h 45 min
Tsy mahatratra ny faladiany akory Ra-Mialy ry zokin’i Domelina a !
Sady taviny no volony ianao Me Hanitra ! Miomana hanetsika ny vahoaka moa e ! 😀
Asivo hetsika any Frantsa r’izareo a !
« NY « TENA GTT » SY NY « TENA TIM » ( AMPITAN-DRANOMASINA ) DIA SAMY NANAO, ARY TENA NAHAVITA BE ! »
Tsy misy mandà an’izany mihitsy e !
Fa ilay hoe « NY TENA GTT » dia milaza fa misy fizarazaràna ao
toy izany koa ny amin’ny TIM (NY TENA TIM…)
Ny firaisan’ireo no tena zava-dehibe,ary TSARA ho fantatry ny olona, fa tsy ny hoe nanao izy na nahavita be : tsy any mihitsy ny olana, satria samy mahalala fa NIHETSIKA tokoa ireo.
Ka raha misy Hetsika : Aoka hisy Filazàna mazava ny amin’io FIRAISANA io.
Na ny Filohan’ny ATSY na ny EROA dia samy hitsangana hanamafy izany. Izany aloha dia mitarika ny ho Filoha IRAY ihany koa e !
Satria na GTT na TIM dia mino aho fa samy Pro-RAVALOMANANA daholo ireo .
Fa izany ve moa dia mbola mila ho azavaina ihany, fa dia ny Hetsika manaraka no ahitantsika azy. Vavolombelon’ny asa ny Bainga, ho maro no ho vavolombelona amin’izay angamba.
Ary mba hisarika ny tsy tonga rehetra dia tsara raha antsoina indray i Bodo hanao fampisehoan-kira 😉
Malahelo an’i Bodo angaha i dà???dia ahoana indray io manja be iray io??
ialah koa ity toa lalina koh!!!sady mivavaka be izy io ry dà, koa tsy mino mihintsy
aho hoe i M Hanitra no hamadika,mba sanatriavo ihany sao bedin’Andriamanitra eo ialah an!!hafa ry mpiandry KISOA
toa an’i zanakisoa , tsy bika no tsy endrika no tsy FANAHY, niteraka ihany izay niteraka an’ikala MPAMS sadika vavy
25 mars 2012 à 0 h 02 min
O ry HPM a! » aza tia izao tontolo izao, na zay zavatra eo amin’izao tontolo izao, fa raha misy tia izao tontolo izao, de tsy ao aminy ny fitiavana ny Ray ». Omeko lesona kely ianareo mpitarika FJKM ireo, zay tsy menatra ny katolika, sy ny antokom-pinoana hafa, ka RAOBY LAVANAREO de entinareo miseho hanaovana politika, satria malahelo ilay mpanome volabe, de havela hiparitaka ny ondy, ary hainareo tsara, fa tsy hanao politika ny mission nareo, fa hitondra ny ondrinareo any an-danitra. Tsy mahagaga raha lasan’ny sectes hafa ny ankabeazan’ny mpino FJKM, satria na ny LOHANY aza, lany andro @ fanaovana politika.
Hoy Davida mpanjaka: » Soa ihany aho nampahoriana, hitandremako ny TENINAO ». Tsy voatery hahita tombontsoa eto @ity fiainana mandalo ity, raha tena mpino marina, ary ny fahoriana, de fomba iray ampiasain’Andriamanitra hamikirana aminy. De inona no soa ho azonareo ry HPM raha lalaovinareo ny aim-panahin’ny ondrinareo, ka mamory olona hikomy ara-politika? Tsarovy, fa adinina aminareo ny ràn’ireny diso fanantenana aminareo ireny. Sahy milaza ve nareo, fa Raosy tohananareo de olo-marina, tsy nisy kilema, eny fa na de ny ran’olona nalatsany aza, tsy manenjika akory ny eritreritrareo. Mba fantatrareo ve fa na iza na iza mpanao politika, de saika fitaka sy lainga avokoa no hanorenany ny fahefany, na iza na iza woa, averiko indray.
Eto fotsiny zao defa azo aseho, ny vokatry ny modely omenareo, fa ny mpianatrareo iray eto ery ambony, miteny an’Andriamanitra, etsy ambany manakisoa olona, izany ny modelinareo ry LAVARAOBY isany ô! raha izaho ianareo, manongo tena aho, ny @ hanaovanareo ny ondrinareo, hany ka nahazo ny sahaza anao tsara ianao Rasendrahasina, teny Ivato, nanaovan’ilay jeneraly zandarma iray iny anao. Tsisy vokany woa le vavakareo, sy ny paikanareo ry Njara, fa midona @ tafo de miverina a! Ataovy fitaovana foana Andriamanitra, fa mbola hasehony anareo foana, fa tsy any ny lalana ry mafy loha, tsy laitran’ny balan’ny fananarana a! ireo ondry diso fanantenana tsy manantsiny no mampalahelo, satria entin’ny lohamasinina miara-mivarina aminy any anaty hantsana. Natao ho anareo io ry ry LAVARAOBY, de mandiniha tsara!
25 mars 2012 à 14 h 15 min
Tsy hoe ref lava ny soratanao mihoatra noho an’ny olona rabe dia oe hanana ny marina enao!!!! Ady @ tsy fahamarinana no hijoroan’ireo Ray aman-dReny ireo ary izany ady zany dia ho an’ny rehetra ka hijery fotsiny ve ny mpitondra fivavahana???… Ny ampahatsiahiviko anao fotsiny dia aza adino fa mbola eo tsika zao @ tataran’ Charles Andrianasoavina izay namingavinga Ny Ray aman-dReny Mpitondra fivavahana dia efa faantatrao oe aiza izy zao????dia tohizo ny anao fa fantatro ny hiafaranao.
Misaotra anareo HMF
Tsy an-dohalika intsony ny ranom-bary, fa efa an-tenda
Ary na mahay milomano toa inona aza, tsy mahaleo ny crosse d’une arme mandetika ny loha
Izany iny lalan’iny, tsy mijanona @ hoe hampanana ny tsy manana fotsiny kay, fa loi du plus fort no tetika tian-dRajoelina Andry Nirina hanjaka manerana ny nosy
Ilay lalana natoron’ny PUTSHISTES dia mijotra mihazo ny fandrobana ny banky isan-tsokajiny…
TSY HISY zavatra manjary fa toloko sy fahalovana no mitoetra eto @ firenena raha mbola mipetraka eo @ io toerana=pouvoir io i Andry Nirina Rajoelina . –
Mankasitraka ary mampahery hatrany anareo ao amin’ny HMF!
Ary hifampitondra amim-bavaka mandrakariva isika, ho fifampaherezana.
Tsy maintsy misy valiny ny finiavana sy ny faharetana amin’ny fijorona amin’ny fahamarinana
lazaiko @ny sasany , aza maba mampitambatra ny fivavahana , sy ny politika.
Tsy fantatro fa nahatsiaro an’ Neninoro sy Ranavalona ary….HoAiza aho fa naheno ity hira ity .
Dia mirary torimaso sambatra ary herinandro vaovao mirindra tsara ho anareo !
saika hadinoko fa mahita zavatra tsara kosa ianao ry Baby any Australie any : panneau solaire – pompe à eau sy ny sisa . Mba handefaso sary aho aky a !
Ity ny hira ho anareo rehetra e
Raha ny tena malagasy, hatramin’izay nahazoany mivavaka izay, ka hatramin’izao, dia miaina amin’ny fivavahana. Na ny fomban’ny Ntaolo aza dia nisy fifandraisany betsaka tamin’ny Fivavahana, eny fa na ny Fihavanana malagasy fotsiny aza !
Tadidinao ve tamin’i Domelina nandrava ny Trano teny Ambohitsorohitra ? Ataoko ity nampiditra ireny milaza azy ho Mpivavaka ireny teny izy ? Hoe mandroaka Devoly hono Mdrrrr!
Ilay anabaviny miseho ho mpivavaka be iny, nanjary Mpanondrana bois de rose gaigivavy, ankoatra ny fivarotana « zavatra hafa « , ny vozongo tsy ferana amin’izany Mdrrr satria ny anadahiny efa « mpisolelaka » vozongo rahateo !!! ! maty aho niny e !
Fantatr’i Rainitay tsara koa izany , satria izy dia mahafantatra an’io rehetra rehetra io, ary tsy misy olona mahay no izy amin’ny malagasy. Izy no tena favy, fa malagasy sisa dia vendrana daholo aminy. Mpangery an-joro azo antoka ka !
Soava mandry daholo e !
26 mars 2012 à 4 h 17 min
Mila esorina @ fomba rehetra i Andry N. Rajoelina.
Tsy ekenay vahoaka intsony hoe olona milaza izay olona citoyen gasy nefa DOUBLE NATIONALITE mitantana ny fiainanay
==> « Madagasikara ho an’ny Malagasy »
Pour une vraie nation et pays indépendant, faut et suffit:
==> « MALAGASY HO AN’I MADAGASIKARA »
nohon’ny fitiavana Є
mandefa ny zanany any @ tafika Frantay
26 mars 2012 à 4 h 28 min
Tonga tany @ hiran’i Ludger Andrianjaka koa ny tenako ry njara an, io alefako io!
Erick Manana: NY ZANAKO
Misaotra Njara dia azafady fa izao vao hitako n hafatrao a!
tena mandrotsirotsy tokoa ilay hiranao( sady manganoano iihany i Bavy).
Misaotra anao Hoaiza nandefa an’i Erick Manana( tiako be!) Ilay hira an!!MDR, izay aho vao nahita an’i
Eric Manana nanao lobaka, sa efa taloha io sa izao???
Oadray, misaotra indrindra Njara a!
Eeeeeh!! Mampahatsiaro ny andro lasa e!
Nentin’ity dj ity nivarina tanteraka any an-kady, any amin’ny helo ny firenena
nefa misy farany ny zavatra rehetra e!
26 mars 2012 à 22 h 37 min
Ho an’ny vahoaka malagasy anie ny fiadanana:
Précédent Article précédent : Fitsarana ny FIGN : Nahemotra amin’ny manaraka indray
Suivant Article suivant : CST Fanatera Longin : Hanery ny mpitarika handray fepetra